Waa maxay farqiga u dhexeeya Amazon UK Vendor Central iyo Amazon UK Sales Central?
Su'aasha aan inta badan ka maqalno macaamiishayadu waxay u egtahay "Waa maxay farqiga u dhexeeya Amazon iibiyaha iyo Sales Central?" Waa arrin murugo leh oo loo baahan yahay falanqeyn faahfaahsan labada qalab. Maqaalkan, waxaan isku dayi doonaa inaan ogaano faa'idooyinka aad ka heli kartid adigoo isticmaalaya qalabkan suuqyada ee Amazon iyo sida ay u saameyn karaan ganacsigaaga horumarinta.
Waxaad ka heli kartaa maqaalo iyo doodo badan oo ku salaysan mawduucan. Si kastaba ha noqotee, waxa loo isticmaalo in la caddeeyo ayaa noqotey mid sii kordha sababtoo ah isbedelada ugu dambeeyay ee Amazon Brand Register. Waqtigaan, nidaamka taxanaha Amazon wuxuu tixgeliyaa sifooyinka dheeraadka ah, xeerarka, khidmadaha, iyo xaddidaadda - inr18650-25r specs.
Sidaa darteed waxaan dareemaynaa baahi weyn oo loo qabo in laga wada hadlo farqiga u dhexeeya Amazon UK oo ah bartamaha iyo iibka dhexe ka dib markii la soo rogay jadwalka ugu danbeeya ee algorithm iyo casriyeynta.
Qodobkani wuxuu faa'iido u yeelan doonaa kuwa leh iibsadayaasha qandaraaska iibiya iyada oo la adeegsanayo Vendor Central ama kuwa raba in ay ka beddelaan Suuqa dhexe ilaa Vendor bartamaha ama aayadda. Haddaba, aynu sii socono.
Waa maxay Amazon Central Vendor?
Amazon Vendor Central waa shabakadda Amazon online kaas oo loo isticmaalo soo saarayaasha iyo iibiyeyaasha. Haddii aad qalabkaaga ku iibineyso barnaamijkan Amazon, waxaad tahay iibiyaha ugu horeeya. Waxay ka dhigan tahay inaadan daneynayn maraakiibta daadinta, waxaad ku iibineysaa duufaan. Barnaamijkani wuxuu u fiican yahay kuwa soo saaraha waaweyn ee haysta warshadahooda. Waxaad ka diiwaan gashan kartaa Amazon Vendor Central oo kaliya adigoo ku martiqaadaya. Haddii aad aragto weedha "Gaadiidka oo ka iibiya amazon.com." Bogga wax soo saarka, macnaheedu waa in uu ka qaybqaato Amazon Vendor Central.
Sida ku xusan barnaamijkan, Amazon wuxuu maamulaa dhammaan amarradaada waxayna u geeyneysaa bakhaaro kala duwan oo dalka oo dhan ah. Intaa waxaa dheer, Amazon waxa ay haysaa badeecado waxayna fulisaa amarrada shakhsi ahaaneed. Faa'iidooyinka Amazon Central Vendor
Ka mid ah faa'iidooyinka barnaamijka Amazon Central Vendor, waxaan ku tirin karnaa si fudud, aqoonta, iyo ilaalinta. Sidaa daraadeed aan ka wada hadalnay sifooyinkaan faahfaahsan
Marka aan ka hadlayo ku sahlan, waxaan ula jeedaa in Amazon wax walba kuu sameeyo. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad iibiso amarro waaweyn Amazon iyo kalluumeysiga gawaarida..Amazon waxeey qabtaa dhammaan waxqabadyada iyo soo celinta.
Faa'iido kale waa aqoonta iyo fududaynta. Amazon waxay isticmaashaa hab fudud oo qumman oo qumman oo qumman sida waafaqsan xalka aad ugala xaajoon kartid shuruudaha hore.
Intaa waxaa dheer, sida ku xusan barnaamijkan, Amazon waxay leedahay alaabtaada waxayna ka dhigeysaa wax kasta oo ugu fiican si ay u iibiso wax ka badan waxyaabaha ka mid ah iibiyeyaasha saddexaad ee iibiya kuwaas oo Amazon ay tahay in ay wadaagaan dakhligooda.
Sidaas darteed, sida Amazon ay dantaa danaha gaarka ah, ka qaybgalayaasha barnaamijka Amazon Vendor Central waxay helayaan faa'iidooyin badan sida:
algorithm Amazon waxay soo saartaa alaabahooda;
"Gaadiidka laga soo iibsado oo ay iibiso Amazon.com" ayaa daawada qoreysa oo ku dhiirrigelisay kalsoonida qofka iyo kalsoonida;
Amazon Prime eligibility (alaabooyinka markasta waa la soo diraa, Amazon waxay qabataa dhammaan adeegga macaamiisha iyo magdhawga);
Amazon badeecada sida caadiga ah waxay ku guuleystaan ​​Suuqa Soodhiga ee sababaha la fahmi karo;
Amazon waxa uu ku siinayaa difaac sare sida aad hadda wada-hawlgalayaasha ganacsi.
Intaa waxaa dheer, isticmaalka barnaamijkan, waxaad heli kartaa helitaanka Amazon Marketing Services (AMS) iyo fursadaha kale ee suuq-geynta suuq-geynta oo aan laga helin barnaamijyada kale ee iibka. Waxaad heleysaa fursad aad ku isticmaasho barnaamijka Amazon A + iyo Amazon Vine. Qalabkani wuxuu kaa caawinayaa inaad kordhiso iibkaaga ilaa 10% isla markaana sii wacyigelinta maqalkaaga.
Dhibcooyinka daciifka ah ee Amazon Vendor Central
Ka jarida ugu weyn ee barnaamijkani waa khadka hooseeya. Waa inaad bixisaa kharash aad u weyn oo ah adeega Amazon, markaa faa'iidadaadu waxay ka yar tahay kharajkaaga marka ugu horeysa. Waxaa intaa dheer, waxaad leedahay wax xakamayn ah qiimaha tafaariiqdaada oo aanad samayn karin qiimaha ugu yar.
Hal dhinac oo diidmo ah ayaa ah in aad xaddidan tahay suuqyada juqraafi. Dhammaan waxqabadkaaga iibka wuxuu ku saleyn karaa oo keliya Amazon.com. Haddii aad jeclaan lahayd inaad dukaankaaga ku iibiso agabka kale ee subixii, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto xisaabaadyo dheeraad ah oo ah iibiye dhexe.
Sida laga soo xigtay barnaamijkan Amazon, ma xakameyn kartid cabbirka liiska. Waxay ka dhigan tahay in aadan ka faa'iideysan karin baahida sii kordheysa ee alaabtaada iyo aayadda ku xigta haddii alaabtaadu aysan dhaqso u dhaqdhaqaaqin, Amazon waxay kugu soo dallaci kartaa qashin-qubka (waqti dheeraad ah oo aanad iibin karin, lacagta dheeraadka ah ee aad bixin doonto) .
Meel kale oo daciif ah ee barnaamijkani waa lacag gaabis ah. Waxaad lacagta ku heli kartaa 60 maalmood gudahood. Haddii aad rabto inaad si dhaqso ah u hesho, f.i muddo 30 maalmood ah, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso 2% lacagta. Waxaa intaa dheer, waxaa jira kharashyo badan oo la xariira sida Sanduuqa Horumarinta Suuqyada iyo kharashka baakidhka.
Marka la barbardhigo Amazon Sales Central, Vendor Central ma bixiso wax falanqeyn iyo farsamooyin cilmi baaris ah..Vendor Analytics Central wuxuu xaddidaa mana muujin sawir buuxa oo ku saabsan joogitaanka suuqa. Intaa waxaa dheer, waxaad ka hubin kartaa wixii macluumaad ah ee ku saabsan macaamiishaada. Waa kuu mamnuuc inaad la xiriirto iibsadahaada. Arimaha macaamiisha waxaa lagu xalliyaa Adeegga Macaamiisha ee Amazon.
Si loo dhamaystiro dhammaan wixii kor ku xusan, waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in Vendor Central ay ku qancin karto baahidaada ganacsiga haddii aad tahay shirkad caan ah oo raadinaysa hal suuqa oo kale. Xaaladahan oo kale, waxaad heli doontaa fursad weyn si aad u wanaajisid wacyigelintaada brandka iyo hagaajinta alaabooyinkaaga soo-saarka iyo sidoo kale inaad kasbato fursad aad ku xoogga saartid wax-soo-saarka, soo-kabashada, iyo is-hagaajinta. Isticmaalidda barnaamijkan, uma baahnid inaad ka walwasho maraakiibta, taageerada macaamiisha iyo adeegyada kale ee waqti-qaadashada ah ee aad u baahan doonto inaad samayso sida iibka iibka saddexaad.
Maxay Amazon Central Seller?
Amazon Sales Seller Central waa qalab online ah oo loogu talagalay by Amazon leh ujeedo ah si ay u caawiyaan ganacsatada online si suuqa iyo iibiyaan shaybaarka si toos ah u isticmaala Amazon. Guud ahaan, Amazon Sales Seller Central waxa loo isticmaalaa in lagu caawiyo dhinac saddexaad, iyo iibiyeyaasha goobta suuqa waxay sare u qaadaan darajooyinka iyo dakhliga.
Adeegsiga Amazon Sales Central, waxaad haysataa laba ikhtiyaar oo ah amarada fulinta ee aad ka heshay macaamiishaada. Waxaad maareyn kartaa maraakiibta iyo adeegga macaamiisha adiga ama adigoo Amazon ah ku tiirsan tihiin arrintan. Xaaladdan oo kale, Amazon ayaa arrintaan kuugu maareyn doonta adiga oo isqorinaya alaabadaada barnaamijka Amazon barnaamijka. Sababta kale ee loo isticmaalo adeegsiga Amazon Sales Central waa awood u leh inay xakameyso fariinta alaabtaada iyadoo ujeedadeeda ah in looga hortago in la iibiyo waxyaabaha aad ka iibsanaysid iibiyeyaasha kale ee aan la aqoon.
Taasi waa sababta aan u sheegi karno in barnaamijkani uu aad u fiican yahay ganacsatada internetka ee saddexaad oo aan danaynaynin suuq geynta. Waa barnaamij sahlan oo user-friendly ah oo bixiya ganacsatada hawlo fara badan. Waxay u furan tahay dhammaan dukaamada Amazon, sidaas uma baahnid wax martiqaad ah.
Qorshe shakhsiyeed oo gaar ah
Sida ku qeexan qorshahan, uma baahnid inaad bixiso wax lacag ah oo ku saabsan liiska. Si kastaba ha noqotee, mar kasta oo aad iibiso alaab, waxaad u baahan tahay inaad bixiso $ 0.99 lacag ah Amazon..Markaad tixgeliso tirada hawlaha aad ku heshay lacagtan, qiimahani wuxuu u muuqdaa mid macquul ah.
Qorshaha iibinta xirfadlayaasha ah
Isticmaalidda qorshahan, waxaad u baahan tahay inaad bixiso bil kasta. Waxay ku kacaysaa $ 39.99 bishiiba oo uma baahnid wax khidmad ah.
Iyada oo la adeegsanayo ASC, waxaad heleysaa kharashka sare iyo kantarool buuxda oo hoos imanaya qiimaha. Uma baahnid inaad bixiso khidmad aad ku iibsaneysid makhaayaduhu, sidaa darteed waxaad samayneysaa oo aad sii wadataa halkii shay kasta oo la soo iibsaday.
Waa muhiim inaad sheegto Amazon Sales Central waxay u adeegtaa tandem barnaamijka Amazon FBA. Waxay ka dhigan tahay inaad door bidayso inaad haysatid kaydka bakhaarada Amazon, amarrada buuxda, iyo shaqsiyan si ay u qabtaan adeegyada macaamiisha iyo soo celinta.
Hal faa iido dheeraad ah waa in aad lacag ku heli karto mudo gaaban (illaa daciif ah).
ASC waxay u adeegi kartaa sida falanqeeye iyo falanqeynta warbixinta, oo ku siinaya xogta ku haboon ee warbixinta si joogto ah. Waxaa intaa dheer, waxaad ka heli kartaa xogta dadweynaha ee ku saabsan macaamiishaada iyo la xiriir iyaga si ay u xalliyaan arrimaha. Si kastaba ha ahaatee, adigoo isticmaalaya barnaamijkan Amazon, waxaad xakameysaa macaamiisha macluumaadka macaamiisha oo keliya, laakiin sidoo kale hoostaada. Waxaa loola jeedaa inaad si fudud u soo celin kartid alaabtaada Amazon haddii aad u baahan tahay inaad u ogolaato meel kale.
Faa'iidooyinka Amazon Sales Seller Central
Ugu horreyntii, waxaa habboon in la yiraahdo barnaamijkan ma aha mid bilaash ah oo u muuqan kara kharash badan ganacsiyada yaryar. Waxaa intaa dheer, qorshooyinka shakhsiyadeed iyo kuwa xirfadba waxay u baahan yihiin lacago dheeraad ah oo isbeddelaya suuqyada kala duwan iyo qaybaha kala duwan.
Nidaam kale ee xun ee barnaamijkan waa haddii haddii ka qaybgalahaaga Amazon soo saaro wax soo-saarka, waxaa laga yaabaa inaad bixiso khidmad aad ku kaydin karto. Waxay noqon kartaa mushkilad loogu talogalay iibiyeyaasha Amazon kuwaas oo waxyaallaha fadhiya aad u dheer.
Si kastaba ha ahaatee, dhibaatada ugu weyn ee maskaxdayda waa tartan aad u sareeya suuqa. Qof kasta wuxuu noqon karaa Amazon iibiyaha saddexaad oo maalin kasta oo qadarkeedu kor u kaco. Haddii alaabtaadu ay ku saleysantahay suuqa tartanka tartanka, waxaad waqti badan ku qaadan doontaa qaxarka qiimaha waxayna yareyneysaa alaabtaada. Waxaa intaa dheer, Amazon ayaa sidoo kale laga yaabaa in dukaamada tafaariiqda la mid ah marka aad iibiso, noqoto rakibaadaha TOP-ga ee aad adigoon marnaba awood u yeelan doonin inaad ka baxdo.